PMP Certified Professional Fanadihadiana Fanontaniana - ITS Tech School
Ny resadresaka nomena tamim-pahatokisana sy azo antoka dia sarobidy amin'ny volamena. Na inona na inona maha-toetra anao na tsy maintsy mitaky fomba fanao maharesy amin'ny fandresena ny asanao fanta-daza. Ireto ny 14 Fanontaniana Fanontaniana sy Valiny ho an'ny PMP Certified Professional mba handresy ny fanadinana fanadihadiana amin'ny ezaka voalohany.
Fanontaniana sy valiny amin'ny fitantanana ny tetikasa
Fanontaniana Fanadihadiana PMP sy ny Fanontaniana Tsara Indrindra:
1. Lazao ahy ny momba anao.
Atombohy ary farano amin'ny fiomanana matihanina eo am-piandohan'ny hevitrao. Raha toa ka mametraka io fanontaniana io ny mpanadihady iray dia mila mahatsapa izay mahatonga anao hieritreritra fa ianao no tsara indrindra ho an'io toerana io, ka manome azy valiny tsara. Andramo ny tsy hampiditra ny fiainanao manokana amin'ity valim-panontaniana ity, miezaha hikatsaka fotsiny ny professionalism.
2. Taiza no niasanao taloha vao haingana?
Ny tantaram-piainanao taloha momba ny fanamboarana PMP. Lazao ny zava-bita misy anao sy ny fankasitrahana rehetra. Lazao koa hoe inona no fomba handaminana an'io toerana io mba hahafahanao manosika ny fanirianao.
3. Manana anjara amin'io asa io ve ianao?
Aoka ho tsotra izao ity valiny ity. Ireo fanontaniana momba ny fanaraha-maso dia mety ho momba ny faritany afovoan'ny asa efa nataonao sy ireo tranga rehetra izay mampiseho ny tena fototra.
4. Inona ireo fanamby tianao hanatontosana an'ity raharaham-barotra ity?
Raha jerena ny fihaonanao taloha, ny valinteninao dia tokony hampidirinao ny votoatin'ny lesona azo tsoahina ary inona no azonao atao hampitaina amin'ny orinasa vaovao.
5. Aiza no ahitanao ny tenanao amin'ny 5 taona?
Raha jerena ny fanamafisana ny fanamafisam-pahefana ataonao, dia mila miara-miasa ao amin'ny fikambanana ianao ary ahafahanao manao fandrosoana hafa.
6. Nahoana ianao no niala tamin'ny asanao farany?
Mitady varavarana misokatra tsara kokoa na fahafahana miasa any an-toeran-kafa. Ifanakalozy hevitra ny fomba ahafahana miomana bebe kokoa amin'ny fandaminana ity fikarakarana PMP ity.
7. Inona no vokatra tsara indrindra anananao?
Miresaha momba ny zava-bita sy ny adidinao ary ny kolontsaina amin'ny an-tsipiriany, ary ny fomba nandraisany ny orinasa sy ny fikambanana rehetra.
8. Inona no azontsika antenaina aminareo amin'ny andro voalohany 90?
Manangana valim-bavaka manamarika izay ahafahanao manomana ny PMP hiomananao hampiakatra ny vokatra tsara indrindra.
9. Inona ny fanirian'ny karamanao?
Miomàna mialoha ary ampio izy ireo fa mahatsiaro ny fahaiza-manaonao, indrindra raha mandinika ny fidirana an-tsehatra amin'ny fitantanana.
10. Marina ve fa olona mpiara-miasa ianao?
Ny mpanadinadinao dia mila mahafantatra raha afaka miara-miasa amin'ny vondrona mahafeno fepetra ianao ary raha ilaina, manomana ny hafa.
11. Nanao fanoloran-tena ho an'ny sehatry ny governemanta ve ianao?
Raha toa ka niaro ny tranga iray izay efa nieritreritra ny fitantanana ny raharaham-barotra amin'ny raharaham-barotra, ampianaro ny scout momba izany ary mamela fanontaniana mifanohitra amin'izany.
12. Nahoana isika no mifidy antsika?
Ifanakalozy hevitra ny zavatra manintona anao ao anatin'ity fandaminana ity sy izay entinao eo amin'ny latabatra.
13. Ahoana no ahafahanao manakantsakana ireo olana saro-bahàna?
Diniho ny olana rehetra atrehanao momba ny mpanjifa iray na ny fomba nandraisanao ny toe-javatra misy fahasamihafana.
14. Hiasa ve ianao raha ambany lanja?
Amin'ny tsy fahafahana manatanteraka fitarainana momba ny tebiteby no zavatra anananao, amin'izany fotoana izany dia mampiseho amin'izy ireo ny fomba itiavanao fientanam-po amin'ny toe-javatra voatery.
Jereo ihany koa:PMP Certification Career Opportunities